ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဒေါသထွက်သော နေ့တစ်နေ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aung San/Aung San Suu Kyi » ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဒေါသထွက်သော နေ့တစ်နေ့
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဒေါသထွက်သော နေ့တစ်နေ့
Posted by ရွာစားကျော် မင်းနန္ဓာ on Feb 14, 2012 in Aung San/Aung San Suu Kyi, Facebook | 33 comments
ကိုBlackchaw ရဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကို ဘာလို့ ချစ်ကြတာလဲ ပို့စ်နဲ့ အောက်က ကွန်မင့်တွေဖတ်ရတော့ ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်း ရေးထားတဲ့ အချက်အလက်တွေ၊ စာအုပ်တွေ အများကြီးကို တထိုင်တည်း ဖတ်လိုက်ရသလိုပါပဲဗျာ.. ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ၀န်ခံရရင် လွတ်လပ်ရေးဖခင်တစ်ယောက်၊ ငယ်ငယ်ကတည်းက ကျွန်တော်တို့ရင်ထဲက သူရဲကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့တင် ဗိုလ်ချုပ်ကို ချစ်ပြီးသား.. ဗိုလ်ချုပ် စိတ်ထား ဘယ်လောက် ရိုးတယ်၊ ဖြောင့်တယ်၊ ကြည်တယ်၊ လူသားဆန်တယ်၊ စာနာစိတ်ကြီးတယ်၊ ကရုဏာစိတ်ကြီးတယ်ဆိုတာ ဒီလိုစာတွေဖတ်မှသာ သိကြရမှာပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်၊ အန်တီစု ပြောခဲ့တဲ့ထဲမှာပါတယ်။ အမှားနဲ့ အမှန်ကို ခွဲခြားပြီးတော့ သိရမယ်။ အမှန်ဘက်ကနေ ရပ်တည်ရဲတဲ့ သတ္တိရှိရမယ်။ လုပ်သင့်တာ မလုပ်သင့်တာကတော့ ဆင်ခြင်ပြီးတော့… ဖေဖေပြောခဲ့တဲ့ စကား တစ်ခွန်းရှိပါတယ်။ သူ့လိပ်ပြာရဲ့ ခုံရုံးရှေ့မှာ သူ မားမားမတ်မတ် ရပ်ပြီးတော့ အစစ်ခံရဲတယ်တဲ့။ အမှန်နဲ့အမှားကိုသိ၊ အမှန်ဘက်ကရပ်တည်ရဲပြီး လုပ်သင့်တာကိုပဲ လုပ်ခဲ့သူ ဗိုလ်ချုပ်ပါ။ (၀န်ခံချက်- အမှားတွေနဲ့ ရွာစားကျော် ကိုယ့်လိပ်ပြာရဲ့ ခုံရုံးရှေ့မှာ မားမားမရပ်ရဲပါ ခင်ဗျာ၊ ရွာသူရွာသားများရော ..?)
ကိုယ်ကျိုးမဖက် တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက် ဘ၀နဲ့အသက်ရင်း အနစ်နာခံခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ပါ။ အခွင့်ရေးယူတာကိုလည်း အလွန်မုန်းသူပါ။ အဲဒီအကြောင်း မေးထဲမှာ ရဖူးတာလေး ရွာထဲမှာ ပြန်ဝေမျှပါတယ်။
မြန်မာ့လွပ်လပ်ရေးတပ်မတော် (BIA) အားဖျက်သိမ်းပြီးမြန်မ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် (BDA) ကိုပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ၁၉၄၂ ခုနှစ်ကဖြစ်သည်။ …. …. …. ….
ရုံးဆင်းချိန်ကျမှပင်ပစ္စည်း (စစ်ဝတ်စုံ)သေတ္တာအပြည့်တင်ထားသော ထရပ်ကားကြီးများ ရောက်လာသဖြင့် စစ်ဌာနချုပ်ရဲဘော်များ၏ အကူအညီဖြင့် ကားပေါ်မှပစ္စည်းများကို သယ်ချနေကြသည်။ နာရီဝက်ခန့်အကြာ ဗိုလ်ချုပ်သည် ရုံးခန်းအတွင်းသို့ ဘယ်အချိန်က ၀င်ရောက်ပြီး အလုပ်လုပ်နေသည်ကို မသိလိုက်သော သူတို့နှစ်ယောက်(ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်တာရာ နှင့် အရာခံဗိုလ်ဗဟန်) က ဗိုလ်ချုပ်ကို လှမ်းမြင်လိုက်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်သည် ဘယ်ကိုမှမကြည့်ဘဲ စားပွဲပေါ်တွင် စာရွက်တွေတထွေကြီးခင်းကာ စာကုန်းရေးနေသည်ကိုတွေ့လိုက်ကြသည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏အ၀တ်အစားမှာ ဗိုလ်ချုပ်နှင့်ထိုက်သင့်သော စစ်ဝတ်စုံမဟုတ်ပေ။ အစိမ်းရင့်ရောင်ရှပ်လက်တိုကို ၀တ်ဆင်ကာ မြင်းစီးဘောင်းဘီရှည်နှင့် စစ်ဖိနပ်တစ်ရံကိုစီးထားပြီး ခါးတွင်ဂျပန်ခါးပတ်ပြားကြီးကို ပတ်ထားသည်။
စားပွဲထောင့်တစ်နေရာတွင် မြန်မာ့လွပ်လပ်ရေးတပ်မတော်ခေတ်တစ်လျှောက်လုံး ဆောင်းလာသည့် ဂျပန်အရာရှိများ ဆောင်းလေ့ရှိသည့် စစ်ဦးထုပ်တစ်လုံးကို တွေ့ရသည်။ အခန်းထောင့်တွင် ဂျပန်ဓားရှည်တစ်လက်ကို ထောင်ထားသည်။ ဗိုလ်ချုပ်၏ ဆံပင်မှာဆီနှင့် ကင်းဝေးနေပြီးဖြီး လိမ်းခြင်းမပြုသဖြင့် ဖရိုဖရဲဖြစ်နေ၏။ ဗိုလ်ချုပ်၏ စစ်ဝတ်စုံမှာလည်း ရာသီဥတုဓာတ်ကြောင့် အဖြူရောင် ရောနှောကာ ဟောင်းနွမ်းနေလေပြီ။ ဗိုလ်ချုပ်က စိတ်ပါလက်ပါ စာရေးနေသဖြင့် သူတို့နှစ်ဦးလည်း အနှောက်အယှက် မပေးလိုသဖြင့် ပြောလက်စ စကားကို ဆက်မပြောတော့ပေ။
သို့သော် အပြင်တွင်ပစ္စည်းသေတ္တာများသယ်ချနေသော ရုံးတာဝန်ခံ၊ ပစ္စည်းထိန်းဌာန အရာရှိများ၊ အကြပ်တပ်သားများသည် စည်းလွတ်ဝါးလွတ် ပြောချင်ရာစကားများကို ကျယ်ကျယ် လောင်လောင် ပြောနေကြသည်။ သူတို့လူစုသည် ဗိုလ်ချုပ်ရုံးပြန်တက်ပြီး သူ့အခန်းအတွင်း အလုပ်လုပ်နေသည်ကို လုံးဝသိပုံမရပေ။ သတိပြုမိပုံလဲမရပေ။
“ဒီလောက်ကြမ်းတဲ့အ၀တ်တွေ ၀တ်ရတာ ကျောယားလိုက်ပါဘီကွာ။ အိမ်မှာတုန်းက တစ်ခါမှတောင်စိတ်မကူးခဲ့တဲ့ ယူနီဖောင်းတွေ ၊ လက်တောင်မသုတ်ခဲ့တဲ့ အ၀တ်ကြမ်းတွေကွာ”
ရဲဘော်တစ်ယောက်က ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်နှင့် ရယ်မောကာပြောလိုက်သည်။ ဗိုလ်ချုပ်သည်စာရေးနေရာမှ ရုတ်တရက်ရပ်လိုက်ပြီး မျက်တောင်မခတ်တမ်း တစ်ဖက်ခန်းမှ စစ်ဝတ်စုံအကြောင်းပြောဆိုနေကြသည်ကို နားစိုက်ထောင်နေသည်။
” ချီးမှပဲ တို့မျှော်လင့်ခဲ့သလိုစမတ်ကျကျမဟုတ်ဘဲ လူရယ်စရာအ၀တ်ကြမ်း ၊ ဖျင်ကြမ်းကြီးတွေနဲ့ လာတိုးနေပြီ။ ကောင်းတယ်ကွာ သိပ်ကောင်း ။ ကူလီဝတ်တဲ့အ၀တ်မျိုးတွေကွ” တစ်ယောက်က ၀င်ပြီးပြောလိုက်သည်။ ဗိုလ်ချုပ်မျက်နှာသည် ရုတ်တရက်တင်းမာခက်ထန်သွားလေသည်။ မျက်လုံးနှစ်လုံး ကလည်းအရောင်တွေ ၀င်းဝင်းတောက်ဒေါသထွက်နေသည်။
“ဟေ့ကောင်တွေ အခုထုတ်ပေးတဲ့စစ်ဝတ်စုံဝတ်ပြီးမြို့ထဲသွားရင် ဂျပန်တပ်ကခိုင်းတဲ့ ဟေးတိုးတပ်သားတွေထင်ပြီး ဂျပန် တပ်ကတန်းခိုင်းမှာသေချာတယ်။ မင်းတို့သာ ကြည့်ပြောပြပေတော့။ ဘယ်လိုအ၀တ်အစားတွေမှန်း မသိပါဘူးကွာ။” တစ်ဖက်ခန်းမှ အသံများကလဲ မလျှော့တမ်းဟာသစွက်ကာ ပြက်လုံးထုတ်လိုက်ပြန်သေးသည်။
ဗိုလ်ချုပ်သည် တွေဝေပြီးမျက်လုံး စုံမှိတ်ကာစဉ်းစားနေသည်။ ဒေါသဖြစ်နေရာမှ ဗြုန်းခနဲလှမ်းပြီး
“ဟေ့တာရာ…..ဟိုဘက်ကစကားပြောနေတဲ့အကောင်တွေအားလုံးငါ့ဆီအမြန်ဆုံးခေါ်ခဲ့စမ်း၊သွားစမ်း။ မြန်မြန်ကွ” အော်ငေါက်ကာ ဗိုလ်တာရာအား လှမ်းပြီးအမိန့်ပေးသည်။ ပါးစပ်သရမ်းနေကြသော ရဲဘော်များသည် သူတို့ခေါင်း မီးလောင်တော့မည့် အခြေအနေကို လုံးဝမရိပ်မိဘဲ စစ်ဝတ်စုံများ၏ အခြေအနေကိုဝေဖန်ရင်း ပြက်လုံးထုတ်နေကြသည်။
ဗိုလ်တာရာလဲ တစ်ချိုးထဲသွားရောက်ကာ အခန်းတွင်းသေတ္တာကြီးများကိုဖွင့်ကာ ၀တ်စုံများကို ကိုင်တွယ်ပြီး စာရင်းယူနေကြသည့် ဗိုလ်၊အကြပ်တပ်သား အားလုံးကို ဗိုလ်ချုပ်၏ အမိန့်အရ ဗိုလ်ချုပ်၏အခန်းထဲသို့ တစုတစ်ရုံးတည်းခေါ်ခဲ့ရသည်။ ဗိုလ်တာရာလည်း စစ်ထုံးစံအတိုင်း ဗိုလ်ချုပ်ကိုအလေးပြုကာ အမိန့်အတိုင်းခေါ်ဆောင်လာပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းပို့ကာ အလေးပြုနေစဉ်ပင်
“မင်းတို့ဘာကောင်တွေတုန်းကွ ၊ ဟေ့ငါမေးနေတာမကြားဘူးလား” စူးစူးဝါးဝါး မေးမြန်းလိုက်သည်။ ဗိုလ်ချုပ်၏အသံသည် စစ်ဌာနချုပ်တစ်ခုလုံးလွှမ်းမိုးသွားသည်။
သူတို့သည်ကြောင်နေကြပြီး မှင်သက်မိသူများပမာ တစ်စုံတစ်ရာကိုမပြောဝံ့ကြပေ။ သတိအနေ ဖြင့်ငြိမ်သက်စွာရပ်နေကြသည်။
“ပြောကြစမ်း၊ မင်းတို့ဘာကောင်တွေတုန်း။ ငါမေးနေတာ မင်းတို့မကြားဘူးလား။ ခုတင်က မင်းတို့ရယ်လားမောလားနဲ့ ပြောနေကြတာတွေလေ” ဗိုလ်ချုပ်သည် နောက်တစ်ကြိမ် စူးစူးဝါးဝါးအော်ဟစ်ကာ မေးလိုက်ပြန်သည်။ အမေးခံရသူအားလုံးမှာ မျက်နှာသေလေးတွေ နှင့်အနည်းငယ်တုန်လှုပ်နေကြသည်။
“ကျွန်တော်တို့ စစ်ဝတ်စုံတွေညံ့တာနဲ့ ဝေဖန်မိပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်” ဗိုလ်အဆင့်ရှိသူတစ်ဦးက အရဲစွန့်ပြီးဖြေကြားလိုက်သည်။
“ဘာကွ။ စစ်ဝတ်စုံတွေညံ့တယ် ကြမ်းတယ်။ လက်တောင်မသုတ်ချင်ဘူးဟုတ်လား ငါအကုန်ကြားတယ် မင်းတို့ဝေဖန်နေတာတွေ” ဗိုလ်ချုပ်သည် ကျယ်လောင်စွာပြောလိုက်ပြီး ကုလားထိုင်မှဗြုန်းခနဲထလိုက်ပြီး တန်းစီထားသူများရှေ့သို့ တက်လာရင်း……
“မင်းတို့ ငါအုပ်ချုပ်နေတဲ့ ထပ်ထဲကအခုထွက်၊ အလကားကောင်တွေ မင်းတို့ကို ငါနဲနဲမှ အထင်မကြီးတော့ဘူး၊ နွားတွေ တို့ရဲဘော်တွေ ယိုးဒယားက ဒီအထိ ရန်သူတွေကို ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်လာရတာ မှတ်မှတ်ရရ ဘယ်စစ်ဝတ်စုံတွေဝတ်ပြီး တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြသလဲ ဟင် ပြောစမ်း” စိတ်ပါလက်ပါ လက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီး မေးလိုက်သည်။
“မင်းတို့ကအခုမှယူနီဖောင်းလေး ဘာလေး စစ်ဝတ်စုံလေးနဲ့ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် လုပ်လို့ကွာ။ ဟေ့တိုင်းပြည်နဲ့လူထုအတွက်ဆိုရင် စစ်ဝတ်စုံမရှိလို့ ခါးတောင်းကြိုက်ပြီးပဲတိုက်ရတော့ရော ဘာဖြစ်လဲ။ စစ်တိုက်နိုင်ဖို့သာ အဓိကကွ။ အခုတော့မင်းတို့က ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် စကားတွေပြောလို့” ဗိုလ်ချုပ်က ခဏရပ်ပြီးဆက်ပြောပြန်သည်။
“အခုတော့ တိုက်ပွဲမှကျဆုံးခဲ့တဲ့ ရဲဘော်ရဲဘက်အချင်းချင်းတောင် မင်းတို့ပြောပုံ သဘောထားတွေက သစ္စာဖောက်နေတဲ့ အကောင်တွေ၊ မင်းတို့ကို ငါ့တပ်ထဲက ထုတ်ပစ်မယ်၊ ထုတ်ရမယ်” ကြိမ်းဝါးလိုက်ပြန်သည်။
အကြိမ်းခံရသူ ဗိုလ်၊ အကြပ်တပ်သားများမှာ မျက်ရည်ကျသူကျ၊ ဒူးချင်းရိုက်ခတ်သူခတ် အတော်စိတ်ထိခိုက်နေကြသည်။ ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန်လမ်းလျှောက်ရင်းတစ်ချက်တစ်ချက် ပါးစပ်သရမ်းသူတွေကို ခေါင်းငဲ့ကာ စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးနှင့်ကြည့်လိုက် လုပ်နေကာ ဗိုလ်ချုပ်သည်
“ဘာလဲကွမင်းတို့က ဂျပန်တွေ ကားစီးပြီး အ၀တ်ကောင်းတွေဝတ်နေတာကို အားကျလို့လား။ အေး မင်းတို့မှတ်ထား။ ငါတို့တပ်မတော်ဟာ ပြည်သူလူထုရဲ့ သားသမီးတွေဆိုတာ ကြည့်လိုက်စမ်း။ တို့ပြည်သူလူထုတွေဟာ စစ်ဘေးဒဏ်သင့်ပြီး တစ်ဖက်က ငပုတွေကတွေ့ကရာဆွဲယူ အနိုင်ကျင့်ချင်တိုင်း အနိုင်ကျင့်ခံနေရတဲ့ဘ၀မှာ မင်းတို့လို အကောင်တွေက ဇိမ်ခံချင်ကြတယ်။ ကားသစ် ကြီးတွေစီးချင်ကြတယ်။ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ပြည်သူလူထုထက် အခွင့်အရေးပိုလိုချင်ကြတယ်။ လူထုက၀တ်စရာ အင်္ကျီ ပုဆိုးမရှိတဲ့အချိန် မှာ မင်းတို့လို အလိုက်ကန်းဆိုးမသိတဲ့ အကောင်မိုက်တွေက စစ်ဝတ်စုံအကောင်းတွေ ၀တ်ချင်ကြတယ်။ မှတ်ထားအခုလိုစိတ်မျိုး အမြင် မျိုးတွေရှိနေသမျှငါမျှော်မှန်းထားတဲ့ ပြည်သူ့တပ်မတော်နဲ့တော့ ဝေးပါသေးတယ်ကွာ။ သိပ်ရှက်စရာကောင်းတယ်။ မင်းတို့ ပြည်သူလူထုအတွက် စစ်တိုက်နေတယ်ဆိုတာ အလကားပဲ လုံးဝ အဓိပါယ်မရှိတော့ဘူး”
“မင်းတို့နားလည်လား။ စဉ်းစားမိလား မင်းတို့ ကိုယ်မင်းတို့ ဗိုလ်တွေ စစ်သားတွေ ရဲဘော်တွေဆိုပြီး တစ်ကယ်စစ်တိုက်ရတဲ့အခါမှာ စစ်ပညာ ကောင်းကောင်းတက်နေပြီလား။ ဘာတစ်ခုမှမတတ်သေးဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အထင်ကြီးပြီး ဘ၀င်မြင့်နေတဲ့ကောင်စားတွေ။ မင်းတို့ ဒီလိုပြည်သူလူထုနဲ့ ကြပ်ကြပ်သွေးခွဲတဲ့စိတ်တွေထားကြ။ ငပုတွေက မင်းတို့ကိုဆော်ဖို့ အသင့်ရှိနေတယ်ဆိုတာ မင်းတို့မြင်ရဲ့လား။ ခွေးကောင်တွေ ဘာမှအသုံးမကျတဲ့မင်းတို့ကို ငါ့တပ်ထဲက ထုတ်ရမယ်” ဆက်လက်ပြီးဒေါနဲ့မောနဲ့ကြိမ်းလိုက်ပြန်သည်။
“မှားပါပြီဗိုလ်ချုပ်၊နောင်တရပါပြီဗိုလ်ချုပ်” အရာရှိနှစ်ဦးက ကတုန်ကယင်ဖြစ်ကာ ငိုယိုသံများဖြင့် တောင်းပန်တိုးလျှိုလိုက်ကြသည်။”
” ငါဘယ်လိုဝတ်ထားလဲ။ ကြည့်ကြစမ်း။ မင်းတို့နဲ့ဘာခြားလို့လဲ။ မင်းတို့က ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လုပ်လို့ကွာ”။ ဗိုလ်ချုပ်သည် သူ၏ ဟောင်းနွမ်းနေသောဝတ်စုံကို လက်ဖြင့်ပုတ်ပြီးပြလိုက်သည်။
“ကျွန်တော်တို့မှားပါပြီဗိုလ်ချုပ်။ တောင်းပန်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အမှားကို ၀န်ချတောင်းပန်ပါရစေ။” မျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင်ကျလျှက် အသနားခံလိုက်ကြပြန်သည်။ ဗိုလ်ချုပ်သည်သိမ်းကြုံးပြီး ဒေါသထွက်နေသော မျက်လုံးအစုံဖြင့် တောင်းပန်နေသူများကို ၀င့်ကြည့်လိုက်ပြီး
“မှတ်ထား၊ ငါ့တပ်ထဲမှာ အခွင့်အရေးယူချင်တဲ့အကောင် တစ်ကောင်မှမရှိရဘူး၊ မပါစေရဘူး။ လူထုငတ်ရင်အားလုံးငတ်မယ် လူထုဆင်းရဲရင် တို့ရဲဘော်အားလုံးဆင်းရဲမယ်။ ငါလဲဆင်းရဲရမယ်။ ငါတို့တွေတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ တပ်မတော်ကြီးဟာ ဒီဝါဒနဲ့ချီတက်ဖို့ အရေးကြီးတယ်။ အခုတော့ မင်းတို့ကောင်တွေကွာ။ ငါလိုက်ပြီးကန်လိုက်ရရင်ကွာ။” ကြိမ်းဝါးလိုက်ပြန်သည်။
သူ့ရှေ့တွင်ရပ်နေကြသူများမှာ သူပြုသမျှ သူပေးသမျှအပြစ်ဒဏ်ကို ခံယူကြမည့်ရဲဘော်များ ဖြစ်နေကြသည်။ အခိုက်အတန့်အတွင်း အပြောမှား၊ အဆိုမှားခဲ့ရာ ယခုအခါ ဗိုလ်ချုပ်၏ ဆုံးမသြ၀ါဒများကြောင့် အမြင်မှန်ရခဲ့သည်။
“သွားကြစမ်း၊ မြန်မြန်ထွက်သွား၊ အကောင်ရှုပ်တွေ ကြာကြာနေရင် မင်းတို့ကို ငါ ဆော်ထည့်မိလိမ့်မယ်။”
ဗိုလ်ချုပ်က ကြိမ်းဝါးကာရုံးခန်းအတွင်းမှ နှင်ထုတ်ပစ်လိုက်သည်။ ပါးစပ်သရမ်းမိသူများလည်း အရေးတကြီး ဗိုလ်ချုပ်ကို အလေးပြုကာ သုတ်သီးသုတ်ပြာနှင့် ကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့ မျက်နှာငယ်လေးများဖြင့် ထွက်ခွာသွားကြလေတော့သတည်း…။
credit: မူရင်းဆောင်းပါးရှင် – တက္ကသိုလ်ခင်မောင်ဇော်
thweni ( Facebook ) ဆီမှ ထပ်မံ ကူးယူဖော်ပြပါသည် ။
ဒါကို ဖတ်ခဲ့ဖူးတယ် ။ တော်တော်ကြာပြီ ။
၀ါဒဟာ ဖြန့် ချီလိုသူတွေရဲ့လက်နက်ပဲ ။
ဒါမျိုးကိုကျတော့ အကြည်ညိုလွန် ဖြန့် ချီ ၀ါဒလို့ ပဲယူဆတယ် ။
အဲဒီခေတ်အခါက မှီလိုက်တယ်လို့့ ဆိုသူတွေရဲ့ ကြည်ငြိုပင်ကိုယ်ရေး ဖြည့်စွက်ချက်က ၉၀ ရာခိုင်နှုံး
ကြည်ညိုလွန် ကိုးစားမှုကြောင့် ဦးအောင်ဆန်းကို ဒုတိယ ဘုရား မလုပ်ကြနဲ့။
ဘုရားကို ကြည်ညိုလွန်ရင် နိဗ္မာန်လမ်းစည် သွေဖည်လိမ့်မယ် ။
အောင်ဆန်းကို ကြည်ညိုလွန်ရင် တိုင်းပြည် လမ်းကြောင်း သွေဖည်လိမ့်မယ် ။
ကြည်ညိုလွန်တာဟာ ဘုရားရဲ့လိုအင် မဟုတ်သလို
ကြည်ညိုလွန်တာဟာ ဦးအောင်ဆန်းရဲ့လိုအင် မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို သိနိုင်ရင်
သူတို့ သူတို့ တွေ ပြောနေကြတဲ့ ဦးအောင်ဆန်းရဲ့ပန်းတိုင်ကို သိကြလိမ့်မယ် ။
ဘာသာရေးအဲလိုလုပ်တော့.. ရဟန္တာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူးများစာအုပ်ကြီး ထွက်လာတော့တာပဲ..။
အတွေးအခေါ်တွေ.. ဂျွမ်းထိုးကုန်ရော..။ ကြောက်စရာ.. :?
လူလူချင်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်လွန်းတဲ့..အလေ့အကျင့်ကို.. ဘာသာရေးက မွေးပေးလိုက်တယ်လို့ သုံးသပ်မိတယ်..
ဘာသာရေးက မွေးပေးတာ မဟုတ်ပါဘူး သူကြီးရှင့်။
ဘာသာကို ခုတုံးလုပ်ပြီး ကိုယ်ကျိုးရှာလိုသူ “လူ” များမှ မွေးတာပါ။
ဒီမှာ လဲ “မူ” နဲ့ အဲဒီမူ ကို ချသော “လူ” လိုပါဘဲ။
လူတွေ မှာ အသိဉာဏ် နဲ့ စဉ်းစားနိုင်အား တစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက် မတူပါဘူး။
အသက်သာကြီး တယ်၊ ကလေး တစ်ယောက် လို ဘဲ စဉ်းစားနေသူတွေ ရှိသလို ကလေးဖြစ်စေဦး အသိဉာဏ်ရည် မြင့်တဲ့ လူကြီး တစ်ယောက်လို တွေးနိုင် တဲ့ကလေးတွေ လဲရှိပါတယ်။
လူတွေ ဆိုတာလဲ လက်ချောင်းတွေလို မညီပါဘူး။
ဒီတော့ အားလုံးဟာ အတွေးအခေါ် တစ်မျိုးထဲ ထွက်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ သဘာဝ ပါဘဲ။ မဆန်းပါ။
ဒီတော့ ပန်းချီကား တစ်ချပ် ချပြီး ပြလိုက်ရင်ဘဲ အဲဒီအပေါ်မှာ ကိုယ့်ထင်ရာ တွေးနိုင်ကြပါတယ်။
ဘာမှ နားမလည်သူရှိမယ်၊ ကြည့်ရုံလေး ကြည့်သူရှိမယ်၊ ပေါ့ပေါ့တွေတဲ့သူရှိမယ်၊ လေးလေး နက်နက် စဉ်းစားသူရှိမယ်၊ ဒီက နေ ပိုကောင်းအောင်ပွါးဖို့ အာရုံရသူတွေ ရှိမယ်၊ ။
အဲဒီ ပန်းချီ ကိုထုတ်မပြ ရင်တော့ ဘယ်သူမှ မမြင်ဘူးပေါ့။
“အကြည်ညိုလွန် ဖြန့် ချီ ၀ါဒ” ဆိုတာ မကောင်းတာကို ကောင်းသယောင် နဲ့ လူတွေ ကို ကိုယ့်ဖက် ကို သိမ်းသွင်း တာ ဆို ရင် ကြည့်ရ ကြားရတာ မကောင်းပါဘူး။
လူတွေ ရဲ့ နားထဲမှာ မျက်စိထဲ မှာ စကားပေါင်းစုံ၊ ပုံစံပေါင်းစုံ ကြားရလေ၊ မြင်ရလေ ပိုကောင်းလေပါဘဲ။ ယှဉ်စဉ်းစားလို့ရတာပေါ့။
သို့သော် အတုခိုးသင့်တဲ့ ဝါဒ အနေ အထိုင် အပြောအဆို အမူအကျင့် ဆိုတာကတော့ ဖြစ်နိုင်သ၍ လူတွေကြားလေ သိလေ ပိုကောင်းလေပါဘဲ။
ဒါတွေဟာ အရင်က အပိတ်ခံ ထားရတာတွေလေ။ အခုမှ နဲနဲပွင့်လာတာ မဟုတ်လား။
အဲဒီ ကောင်းတာတွေ ကို နားလဲထောင် မယ် အဲဒီအတိုင်းလဲကျင့်ကြံ မဲ့သူရှိတယ်။
နားတော့ထောင်မယ် မကျင့်ကြံနိုင်ဘူး ဆိုတာလဲ ရှိမယ်။
ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် မြန်မာပြည်ရဲ့ ဒီနေ့ အခြေအနေမှာ မကောင်းတဲ့ အကျင့်စရိုက် အတွေးအခေါ်တွေ များနေတာ မို့ ဒီလို ကိုးကွယ်ဖို့ ကောင်းတဲ့ စရိုက် ရှိသူကို ကိုးကွယ်စိတ် ရှိနေကြရင်ဘဲ တော်လှပါသေး။
ဒီနောက်မှာ “နားထောင်ရုံ မပြီး ကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံ ရမှာ ဆိုတာကို အသိပေး နေဖို့ကတော့” ဒါကို “သိရုံမက ကိုယ်တိုင်လဲ လက်တွေ့ကျင့်ကြံ ပြီးနေနေတဲ့” လူများရဲ့ တာဝန်ဖြစ်မှာ ဖြစ်ပါကြောင်း။ ;-)
——၀ါဒ ဖြန့်သည် ဖြစ်စေ…..ချဲ့ကားရေးသည်ဖြစ်စေ.။
မှန်ကန်သော သဘောထား၊ ဖြောင့်မှန်သော အတွေးအခေါ် ဖြစ်ပါက
လိုက်နာ စံထားစရာ ideal အဖြစ် ယူရပေမည်။
ဗိုလ်ချုပ်သဘောထား ဖြစ်စေ၊ တခြားသူတစ်ဦး၏ သဘောထားဖြစ်စေ၊
လိုက်နာ စံထားစရာ ideal မှန်ပါက
တစ်ပိုင်းပဲရရ တစ်စိတ်ပဲရရ အတုခိုးရ လိုက်နာရ ပေမည်။
မှန်ကန်သော သဘောထား၊ ဖြောင့်မှန်သောအတွေးအခေါ် ideal ကို အဓိကမထားပဲ။
မိမိနာမည်ကြီးဖို့၊ မတူသောအမြင်ဖြစ်ဖို့၊ မီလျံနာဖြစ်ဖို့ ၊ မိမိအတ္တကိုရှေ့တတ်တင်သောအယူအဆ
မိမိကောင်းစားဖို့ (သို့) မိမိဘာသာ၊ လူမျိုးကောင်းစားဖို့ သာအဓိကထားသော ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင်ပြီးရော၊ သဘောထားမျိုးဖြစ်ပါက……
ဘုရားသခင် သဘောထား ပင်ဖြစ်စေ၊
နတ်ဘုရား သဘောထား ပင်ဖြစ်စေ၊
သဂျီးမင်း၏ ဂျပန်အာဂျီနိုမိုတို ဂိုဏ်း၏သဘောထားပင်ဖြစ်စေ
အထင်ကြီးစရာ လေးစားစရာ လိုက်နာစရာ မလိုအပ်ပေ။
လေးစားအတုယူဖွယ် စရိုက် ကို ဖော်ထုတ်ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါဘဲ ရွာစားကျော်ရေ။
ဒါဟာ တိုင်းပြည်လူထု ကိုခေါင်းဆောင်ချင်သူတိုင်း ထားသင့်တဲ့ စိတ်မဟုတ်ပါလား။ အတုယူစရာပါ။
အဲဒီလိုသာ ခေါင်းဆောင်တိုင်းက စိတ်ထားနိုင်ရင် ပြည်သူတွေ ခွက်စွဲ စရာ ဘယ်လိုပါ့မလဲ။
ကိုအဘဖော – ရေထဲမှာ နက် လို့ရနေတာလား။ ကုန်းနဲ့ နီးတဲ့ အချိန်လား။
ချကားမချပ် – ရှစ်ကြီးပေါ်မှာ သူကြီးဆိုတာ ဘုရင်လိုနေရဆိုဘဲ။
Post နဲ့မဆိုင်ဘဲ ဝင် ဖော မိလို့ စောဒီး။ ;-)
ကိုငှက်ကြီး၊ ပဒုမ္မာ၊ ကိုရင်မောင်
မဖတ်ဖူးသေးတဲ့ သူတွေ ဖတ်ဖြစ်အောင်တင်ပေးလိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာသိတော့
ပိုပြီး ပီတိဖြစ်မိပါတယ်ဗျာ.. ကွန်မင့်တွေအတွက် ကျေးဇူးပါ
မတူတဲ့ အမြင်နဲ့ ၀င်ဆွေးနွေးပေးတဲ့ ကိုနိဂမိ၊ သူကြီးခိုင် နဲ့ MTY တို့ကိုလည်း ကျေးကျေးပါ..
၀ါဒဖြန့်သူက ဖြန့်နေမှာဖြစ်သလို၊ ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးမှ လက်ခံရမှာက စာဖတ်သူအပိုင်းလို့ ပြောချင်ပါတယ်
ဘယ်သူဘယ်လိုဝါဒဖြန့်ပါစေ ဗိုလ်ချုပ်ဟာ နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးဖခင်၊ ဘုရား၊ ဆရာ မိဘတွေနဲ့ တတန်းတည်းထားတဲ့ ကျွန်တော်လေးစားတဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးပါ..
၀ရန်ကိုးသွယ်လက်စွပ်ရှာဝတ်၊ ရေမွှေးနံ့တသင်းသင်း နဲ့ ကျော့ကျော့လေးဝတ်ပြီး အခွင့်အရေးအကြောင်းပဲ ပြောနေတဲ့ ယနေ့ခေတ် တပ်မတော်အရာရှိ ကြီး၊ငယ်များ ဖတ် မှတ် ဆင်ခြင်ကြမယ်ဆိုရင်ပဲ တင်ရကျိုးနပ်ပါပြီ
ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်တောင် အဲလောက်ရှင်းမပြတတ်တာ အမှန်ပါ
ကွန်မင့်တွေ အတွက် ကျေးဇူးပါ အရီးေ၇
ငတ်ပြတ်နေတဲ့ ကြား ဘယ်နေရာက နက်ဝင်? မန့်ပေးသွားတဲ့ ဘဖောကိုရောပေါ့
မြှားပုံလေးထပ်ထည့်တဲ့ အချိန်မှာ စာလုံးပေါင်းမှားသွားပါတယ်
ကျောက်ကိုးမျိုးစီထားတဲ့ န၀ရတ်ကိုးသွယ်လက်စွပ်ကို ပြောတာပါ
အန္တရာယ်လည်းကင်း၊ လာဘ်ဝင်၊ သြဇာအာဏာလည်း ရှိစေပါတယ်တဲ့
ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ရဲရင့်မှုစွမ်းရည်သတ္တိ၊ မြင့်မြတ်တဲ့ စိတ်ထားတွေကို ပိုမိုမြင်မိတာမို့……..
ကိုးကွယ်လောက်အောင် ပြည့်စုံရင်တော့ ကိုးကွယ်ရမှာပဲ လို့ ယူဆပါတယ်။
ကျေးဇူးဗျာ မဖတ်ရသေးတဲ့ အကြောင်းအရာလေးပါ..
ဗိုလ်ချုပ်က ကျွန်တော်တို.လူငယ်တွေအတွက် စံပြပါပဲ… မိဘကလေးစားလို. လိုက်လေးစားတာမဟုတ်ဘူးနော်..
ငါတို့ဗိုလ်ချုပ်ကို စော်ကားတဲ့ တရုတ်လက်ပါးစေ စစ်တပ်သူလျှို ဇိမ်ဝါဒီ သာသနာဖျက် အတ္တထိပ်ခေါင် သဂျီးကို ဝိုင်းဆဲဂျကွာ…..။ အဆဲနိုင်ဆုံးလူကို ငါရထားတဲ့ပွိုင့် အကုန်ပေးဒယ်…။ :mad:
စိတ်လျှော့ပါ.. တပ်ချုပ်ကြောင်ကြီးခင်ဗျာ 8-)
တူလည်း တူ့ထိုင်ခုံပေါ်က လှမ်းမြင်သလောက် တတိပေးတာပါ..
သွားဆဲလို့ လက်စွဲတော်နှလုံးပူးနဲ့ ချိန်တာခံရပါအုံးမယ်
တပ်ချုပ်ကြောင် အာဏာသိမ်းမယ်ပြောတဲ့ ကိစ္စရော အစာကြေသွားဘီလား
မသိသေးဝူး .. တို့မီး ရှို့မီး လစ်ပီး ..
မျက်ရည်များတောင်လည်ရှာတယ်။ တကယ်ဗျာ မျက်ရည်စို့တက်ပြီး ဖတ်သွားပါတယ်…
အော် အဖေရယ် အဖေခြေမှုန်ကို သားတို့မှီအောင်တော်တော်ကြိုးစားရမယ်….
“မှတ်ထား၊ ငါ့တပ်ထဲမှာ အခွင့်အရေးယူချင်တဲ့အကောင် တစ်ကောင်မှမရှိရဘူး၊ မပါစေရဘူး။ လူထုငတ်ရင်အားလုံးငတ်မယ် လူထုဆင်းရဲရင် တို့ရဲဘော်အားလုံးဆင်းရဲမယ်။ ငါလဲဆင်းရဲရမယ်။ ငါတို့တွေတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ တပ်မတော်ကြီးဟာ ဒီဝါဒနဲ့ချီတက်ဖို့ အရေးကြီးတယ်။ အခုတော့ မင်းတို့ကောင်တွေကွာ” …
အော် ခုတော့လဲ လုံးဝကို ဆန့်ကျင်ဘက်ကြီး ပါလားနော်…
မသိသေးတဲ့ တို့ ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်းကို သိသွားပြီးလိုက်နာကျင့်သုံး သင့်သည်များကိုမှတ်သားသွားပါကြောင်း။ ဖတ်ပြီးငိုချင်သလိုလိုနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။ စာရေးသူ ရွားစာကျော်တော်လွန်းလို့ ကိုယ်တိုင် ဘေးမှာထိုင်ပြီးကြည့်နေသလိုကိုခံစားရတယ်။ မျက်လုံးထဲမြင်ယောင်မိတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကို မမှီလိုက်လေးခြင်းလို့ ၀မ်းနည်းမိတယ်ဗျာ။ သူ့နားမှာနေရင် သူစိတ်ဓါတ်ကော်ပီ အပြည့်ရမယ်လို့ ထင်မိပါကြောင်း။
မူရင်းဆောင်းပါးရှင်က တက္ကသိုလ် ခင်မောင်ဇော်ပါခင်ဗျာ..
အခွင့်အရေးယူပြီး အခွင့်ထူးခံချင်တဲ့စိတ်ကို ဗိုလ်ချုပ် မုန်းတီးကြောင်း
တ်ဆိုးမာန်ဆိုးနှင့်ကြည့်လိုက် လုပ်နေကာ ဗိုလ်ချုပ်သည်
“ဘာလဲကွမင်းတို့က ဂျပန်တွေ ကားစီးပြီး အ၀တ်ကောင်းတွေဝတ်နေတာကို အားကျလို့လား။ အေး မင်းတို့မှတ်ထား။ ငါတို့တပ်မတော်ဟာ ပြည်သူလူထုရဲ့ သားသမီးတွေဆိုတာ ကြည့်လိုက်စမ်း။ တို့ပြည်သူလူထုတွေဟာ စစ်ဘေးဒဏ်သင့်ပြီး တစ်ဖက်က ငပုတွေကတွေ့ကရာဆွဲယူ အနိုင်ကျင့်ချင်တိုင်း အနိုင်ကျင့်ခံနေရတဲ့ဘ၀မှာ မင်းတို့လို အကောင်တွေက ဇိမ်ခံချင်ကြတယ်။ ကားသစ် ကြီးတွေစီးချင်ကြတယ်။ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ပြည်သူလူထုထက် အခွင့်အရေးပိုလိုချင်ကြတယ်။ လူထုက၀တ်စရာ အင်္ကျီ ပုဆိုးမရှိတဲ့အချိန် မှာ မင်းတို့လို အလိုက်ကန်းဆိုးမသိတဲ့ အကောင်မိုက်တွေက စစ်ဝတ်စုံအကောင်းတွေ ၀တ်ချင်ကြတယ်။ မှတ်ထားအခုလိုစိတ်မျိုး အမြင် မျိုးတွေရှိနေသမျှငါမျှော်မှန်းထားတဲ့ ပြည်သူ့တပ်မတော်နဲ့တော့ ဝေးပါသေးတယ်ကွာ။
လယ်ပြင်မှာ ဆင်သွားသလို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကြီး မြင်မိပါကြောင်း။
ငါတို့တပ်မတော်ဟာ ပြည်သူလူထုရဲ့ သားသမီးတွေဆိုတာ ကြည့်လိုက်စမ်း။ တို့ပြည်သူလူထုတွေဟာ စစ်ဘေးဒဏ်သင့်ပြီး တစ်ဖက်က ငပုတွေကတွေ့ကရာဆွဲယူ အနိုင်ကျင့်ချင်တိုင်း အနိုင်ကျင့်ခံနေရတဲ့ဘ၀မှာ မင်းတို့လို အကောင်တွေက ဇိမ်ခံချင်ကြတယ်။ ကားသစ် ကြီးတွေစီးချင်ကြတယ်။ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ပြည်သူလူထုထက် အခွင့်အရေးပိုလိုချင်ကြတယ်။ လူထုက၀တ်စရာ အင်္ကျီ ပုဆိုးမရှိတဲ့အချိန် မှာ မင်းတို့လို အလိုက်ကန်းဆိုးမသိတဲ့ အကောင်မိုက်တွေက စစ်ဝတ်စုံအကောင်းတွေ ၀တ်ချင်ကြတယ်။ မှတ်ထားအခုလိုစိတ်မျိုး အမြင် မျိုးတွေရှိနေသမျှငါမျှော်မှန်းထားတဲ့ ပြည်သူ့တပ်မတော်နဲ့တော့ ဝေးပါသေးတယ်ကွာ။ သိပ်ရှက်စရာကောင်းတယ်။
အထင်ကြီးစရာ လေးစားစရာ လိုက်နာစရာ မရှိအပ်ပေ။
ဗိုလ်ချုပ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးက အရမ်းကိုရှားပါတယ်။ အင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ ရောင့်ရဲတင်းတိန်နိုင်သူပါ။ ခုချိန်ထိသာဗိုလ်ချုပ်ရှိခဲ့ရင် ရွံ့စရာကောင်းတဲ့တပ်မတော်ကြီးဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး… ခုတော့ အခွင့်အရေးအားလုံးယူပြီး ပြည်သူ့မျက်နှာကိုမကြည့်တဲ့စစ်သားတွေကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်သေခဲ့ရတယ်။ လွန်စွာနှမြောတသမိပါ၏..
ကိုရွာစားကျော်ရေ post လေးကိုကူးတင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါဗျာနှော့။ ဗိုလ်ချုပ် လို စိတ်ဓါတ်မျိုး ကျနော်တို့နိုင်ငံက စစ်ဗိုလ်တွေဆီမှာ ရှိရင်သိပ်ကောင်းမှာပဲဗျာ။ အခုတော့ ပြည်သူထဲက ပြည်သူတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ တပ်မတော်ဖြစ်ပေမဲ့ ပြည်သူကတခြား စစ်တပ်က တခြား ဖြစ်နေတယ်။ လောကစည်းစိမ်တွေခံစားနေရတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြည်သူထဲက ပြည်သူပါပဲလားလို့ တွေးဖို့မေ့နေကြ တယ်နဲ့တူတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ ဗိုလ်ကျစိုးမိုး ခဲ့ပေမဲ့ နောက်ဆုံးတော့လဲ ပြည်သူတွေရဲ့မောတ်တာတရားကို ကြာကြာတောင့်မခံနိုင်ပဲ ကိုယ့်နေရာကိုယ်ပြန်သွားရမှာပါပဲလေ။ အများအတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်လို ခေါင်းဆောင်မျိုး မရှိတောတာဟာ နိုင်ငံ အတွက် လူမျိုးအတွက် အရမ်းကိုနစ်နာခဲ့ရတယ်။ နိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပန်းတိုင်ကိုလျှောက်လှမ်းနေတဲ့ အချိန်ဖြစ်တာမို့ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေအားလုံး ဗိုလ်ချုပ်လို စိတ်ဓါတ် မျိုးမွေးမြူကြ ပါဗျာ။
ဒီပိုစ့်လေးက ကောင်းပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်လဲကောင်း အကျိုးသက်ရောက်မှု့လဲကောင်းပါတယ်။
ဒီထဲမှာ ဗိုလ်ချုပ်ပြောတဲ့စကားတွေဟာ ဗိုလ်ချုပ်လေသံနဲ့တော့ မတူဘူးလို့ ခံစားမိတယ်။
စစ်ရုံးထဲမှာ ဗိုလ်ချုပ်က ဂျပန်တွေကို ရည်ညွှန်းခေါ်ဝေါ်တဲ့စကားတွေနဲ့ ဝေဖန်တဲ့စကားတွေဟာလဲ ကာလဒေသနဲ့ ကိုက်ညီမှု့မရှိဘူးလို့ ထင်မြင်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်က အဲလောက်မညံ့လို့ (ဂျပန်စစ်ထောက်လှန်းရေးတွေထက်တော်လို့)၊ ကိုယ်နှုတ်အမူအယာတွေ ထိန်းနိုင်လွန်းလို့ ၊ ပီပီပြင်ပြင်သရုပ်ဆောင်နိုင်လွန်းလို့ ဂျပန်မျက်စေ့အောက်မှာတင်နေပြီး ဂျပန်တော်လှန်ရေးကို စီစဉ်နိုင်ခဲ့တာပါ။
သို့သော်… မည်သို့ဆိုစေ…. အပေါ်မှာမန့်ထားတဲ့ True Answer ရဲ့ကွန်မင့်အတိုင်းပါပဲ။
“——၀ါဒ ဖြန့်သည် ဖြစ်စေ…..ချဲ့ကားရေးသည်ဖြစ်စေ.။
တစ်ပိုင်းပဲရရ တစ်စိတ်ပဲရရ အတုခိုးရ လိုက်နာရ ပေမည်။…”
ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်း ဘာလို့ ပြောဖြစ်၊ရေးဖြစ်ကြသလဲဆိုတော့ စံထားလောက်တဲ့ သူ့ အရည်အချင်းတွေကြောင့်ပါပဲ။ ဗိုလ်ချုပ်ကို ချစ်ရုံမက ဗိုလ်ချုပ် စိတ်ထား ဘယ်လောက် ရိုးတယ်၊ ဖြောင့်တယ်၊ ကြည်တယ်၊ လူသားဆန်တယ်၊ စာနာစိတ်ကြီးတယ်၊ ကရုဏာစိတ်ကြီးတယ်ဆိုတာ ဒီလိုစာတွေဖတ်ပြီး သိစေချင်တာပါ။ အရီး ခင်လတ် မန့်ထားသလို အတုခိုးသင့်တဲ့ ဝါဒ အနေ အထိုင် အပြောအဆို အမူအကျင့် ဆိုတာကတော့ ဖြစ်နိုင်သ၍ လူတွေကြားလေ သိလေ ပိုကောင်းလေဘဲ မဟုတ်ပါလား။
ဗိုလ်ချုပ်က စစ်သားဆိုတော့ ဒီနေ့စစ်တပ်နဲ့ပဲ ချိန်ထိုးကြည့်မိကြတာ အဖြစ်များတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် လူတွေအများ စံယူလိုက်နာနိုင်ရင် လောကကြီး ပိုကောင်းသွားတာပေါ့ဗျာ။ ထိရောက်မှုတော့ ကွါမှာပေါ့..
ရွားစားကျော် မိန်းမက ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်း ဒီပို့စ်လေးတွေဖတ်မိ၊ စိတ်ထားလေးတွေ အကောင်းဘက်ပိုရောက်သွားတော့ သူ့ထမိန်နားခိုစားနေတဲ့ ရွာစားကျော်ဘ၀ ပိုအေးချမ်းမပေါ့။
အဲ တဂျီးတို့ သမ္မဒဂျီးတို့လို အခေါင်အချုပ်ကြီးတွေကလုပ်ကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့် အောက်က ရွာသူရွာသားတွေ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအထိ ချမ်းသာကြမှာပေါ့ဗျာ.. ဟုတ်ဘူးလား
နိုင်ငံရေးနဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းတင်မကဘူးဗျ..စီးပွားရေး လူမှုရေးမှာရော ဒီလိုပဲ
အောင်မြင်ပေါက်ရောက်ပြီးသား လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေ ဖတ်ရှုဆင်ခြင်မိကြရင် ရေများရာ မိုးရွာတဲ့ အဖြစ်မျိုးတွေ ပပျောက်သွားမယ် (မသကာ..ဘီလ်ဂိတ်ထုံး နှလုံးမူပြီးတော့လေ.. )
ဆရာ၊ဆရာမတွေ ဖတ်မိ အတုယူ၊ သင်ပြကြရင် ကျောင်းသားတွေ ကောင်းကျိုးရမယ်
ဆရာဝန်၊အင်ဂျင်နီယာတွေ …. ဆိုရင် ….
၀န်ထမ်း၊ အရာထမ်းတွေ… ဆိုရင် …
… ဆိုရင် …
ဖြောင့်မှန်သော အတွေးအခေါ်၊ မှန်ကန်သော သဘောထား၊ တည်ကြည်သောစိတ်ဓာတ်ဖြင့် လူ့ဘောင်အကျိုး သယ်ပိုးနိုင်သူများ ဖြစ်ကြပါစေသော်ဝ်….
ဗိုလ်ချုပ်ပြောတဲ့စကားတွေဖတ်ပြီး မျက်ရည် ၀ိုင်းတယ်…..
ဗိုလ်ချုပ်ပြောခဲ့တဲ့ စကားတွေ တစ်ကယ်မှန်တာပဲ..
ဒီလိုလူတွေ ရှိနေလို့လဲ ဒီလိုဘ၀မျိုးနဲ့ နေနေရတာ
ဗိုလ်ချုပ်သာ အခုချိန် ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့….
ကျုပ်လဲ True Answer နဲ့ တသဘောတည်းပါဗျား..
ကြည်ညိုစရာကောင်းသူကို ကြည်ညိုတာ ဘာဖြစ်တုန်းဗျာ။ မြန်မာတနိူင်ငံလုံးထိခြင်တဲ့သူထိ စော်ကားခြင်တဲ့သူစော်ကား .. ဒါပေမဲ့ ဗိုလ်ချုပ် ကိုမထိနဲ့ မစော်ကားနဲ့ ။ ဒီတိုင်းပြည်ဒီလိုနေရတာ ဗိုလ်ချုပ်ကြောင့်ဆိုတာသိစေခြင်တယ်။ မြန်မာတင်ဟုတ်ဘူးဗျာ ကမ္ဘာက လေးစားကြည်ညိုခဲ့ရတဲ့သူ အနီးနားနိူင်ငံတွေအကုန်သိတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်းက ၀ါဒဖြန့်မဟုတ်ဘူး။ အမှန်တရား ။ 100 ရာခိုင်းနှုန်း မဟုတ်တောင် 99 ရာခိုင်နှုန်းမှန်တယ်။ ဗိုလ်ချုပ် ဘယ်လောက်ဖြူစင်လဲဆိုတာ မီလိုက်တဲ့သူတိုင်းသိကြပါတယ်။ မတော်မတရားတဲ့ သူတွေက မေ့အောင်လုပ်ထားကြလို့ ပျောက်အောင်လုပ်ထားကြလို့ ဗိုလ်ချုပ် အကြောင်းတွေမှေးမှိန်နေတာ .. ခုလိုဖော်ပြပေးတဲ့သူရှိတဲ့အတွက် တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ။ နောင်လာနောက်သားများလဲ သိစေခြင်တယ် အတုယူစေခြင်တယ်။ ဘုရားကို ဘာကြောင့် ကိုးကွယ်ကြလဲ…. ကိုယ့်အယူဆနဲ့ကို မှန်တယ်ထင်လို့ ကိုးကွယ်ကြတယ်။ အဲလိုဘဲ ဗိုလ်ချုပ်ကို ဘာကြောင့်ချစ်ကြလဲ… မြတ်နိူးကြလဲ… ကိုယ့်အယူဆနဲ့ ကိုယ်ပေါ့ဗျာ။ အနော်ရထာ တော်တယ်ကောင်းတယ် ကျန်စစ်မင်းတော်တယ် ကောင်းတယ် ဦးအောင်ဇေယျ တော်တယ်. ဘုရင့်နောင် တော်တယ်…. ဒါပေမဲ့ အားလုံးထဲမှာ ဗိုလ်ချုပ်အတော်ဆုံးဘဲ ဗိုလ်ချုပ်အကောင်းဆုံးဘဲ …ဒါကျုပ်အယူအဆ..
ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ image ကိုေ၀၀ါးသွားအောင်၊ မေ့လျော့သွားအောင် မသူတော်တွေ ဘယ်လိုပဲလုပ်လုပ် ပတ္တမြားမှန်တော့ နွံမနစ်ပါဘူးဗျာ…
General Aung San is the the most real simple kind Myanmar soldier.